Ihuenyo abụọ nwere keyboard mebere na ike chaja ikuku na kọmpụta: Echiche sitere na Apple | Esi m na mac
Ikekwe ihe kacha mkpa gbasara Apple abụghị ngwaọrụ ya ugbu a, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke ọdịnihu. Maka nke a, nkewa R + D + I bụ ihe dị egwu na ụlọ ọrụ. Ọnụ ọgụgụ patent a na -edeba aha kwa ụbọchị n'aha ụlọ ọrụ America bụ ọnụ ọgụgụ dị oke elu. Ọ naghị adị mfe mgbe niile ma mgbe ụfọdụ a na -enwe esemokwu gbasara ikike iwu ndị ahụ. Okwu dị ugbu a bụ nke a: Esemokwu dị na kọmpụta nwere enyo ihu abụọ, keyboard mebere na ike chaja ikuku. N'oge a ọ dị ka echiche mbụ bụ maka Apple.
Ụlọ ọrụ Patent na Trademark nke United States enyela Apple patent maka MacBook nke Ihuenyo abụọ nwere keyboard mebere nke na -anọchi ahụigodo ọdịnala yana yana ike chajịa iPhone na -enweghị eriri. Dị ka a kọrọ nke Patently Apple dere, E gosipụtara patent a afọ atọ gara aga, mana ọ bụ ugbu a ka anyị nwere ike ikwu na ọ bụ Apple nwere ike ịnya isi na echiche ahụ ahapụla akụrụngwa ya.
Patent nke Apple na -egosi ahụigodo mebere na nhazi ọdịnala. Agbanyeghị, n'ihi na a na -emepụta onyonyo igodo ụdị keyboard a site na ihuenyo n'okpuru akpa elu, Enwere ike ịkwado nhazi ahụigodo dị iche iche. N'elu MacBook ahụ nwere ihu abụọ, enwere ike iji mpaghara ahụigodo mebere. N'ụzọ dị otu a, jikwa interface onye ọrụ ọzọ dịnụ nke nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye njikwa egwuregwu.
MacBook a na -eche echiche, ga -agụnye sensọ biometric, dị ka ID ID. Mmetụta mkpịsị aka na chaja ikuku, maka ngwaọrụ Apple ndị ọzọ nwere ikike chaja a.
Apple na -ekwu na enwere ike idozigharị keyboard a mebere, na -agbanwe ọnọdụ nke keyboard mebere na trackpad. Site na ahụigodo mebere, Apple nwekwara ike weta mmegharị iOS na iPadOS, dị ka tuo, mbugharị, swipe ka ịhọrọ..etc;
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ihuenyo abụọ nwere bọọdụ igodo mebere yana ike chaja ikuku na kọmpụta: echiche Apple
Vidio nkwalite ọhụụ na -emikpu anyị n'ime oge nke abụọ nke Ekwu Eziokwu